တောင်သမန်သားလေး: July 2014
ကျွန်တော် ကွန်ပျူတာမှာသုံး ဖို့ရော၊ ဖုန်းထဲကနေ root လုပ်လို့ရအောင် root apk လေးရော တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ....ကြိုက်တယ်လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒေါင်းသွားတော့ဗျာ
ဒေါင်းလော့လင့် နှစ်ခုတင်ပေးထားပါတယ်၊ ကြိုက်တဲ့လင့်ကနေသာဒေါင်းသွားတော့ဗျာ
Posted by lin linn at 5:33 AM
သြဂုတ်လ (၂) ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်၊ နေပြည် တော်၊ မန္တလေး၊ စစ်ကိုင်း၊ ရွှေဘို၊ မိတ္ထီလာ၊ ရမည်းသင်း၊ စသည် မြို့များတွင် Ooredoo လိုင်း စတင် အသုံးပြုနိုင် ပါမည်။
သြဂုတ်လ (၁၅) ရက်နေ့တွင် မကွေး၊ ရန်ကုန်၊ နေပြည်တော်၊ မန္တလေး နှင့် မုံရွာမြို့တို့တွင် Ooredoo လိုင်း စတင် အသုံးပြုနိုင် ပါမည်။
အောက်တိုဘာလ (၁၅) ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း အားလုံးသို့ Ooredoo ကဒ် ယူဆောင်၍ ပြောဆိုနိုင် ပါမည်။ တစ်နိုင်ငံလုံး အနေဖြင့်် လပိုင်း၊ နှစ်ပိုင်း အတွင်း ပြောဆို အသုံးပြုနိုင်မည်။
Ooredoo Call Centre - 234 Register ပြုလုပ်ရန်အတွက် - မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ - နေရပ်လိပ်စာ - ဓာတ်ပုံ နှင့် လက်မှတ် စသည်တို့ လိုအပ်ပါသည်။
မှတ်ပုံတင် မပေးရသေးသော Card များနှင့် Register မတင် ရသေးသော ကဒ်များ 14 ရက်အတွင်း ရုံးမှ Auto ပိတ်ပါမည်။
Ooredoo Service ခ ကောက်ယူမည့် နှုန်းထားများမှာ - Ooredoo အချင်းချင်း ခေါ်ဆိုပါက (၁)မိနစ်လျှင် - 25 ကျပ် အခြား Operator (MPT, Telenor, Mectel) အား ခေါ်ဆိုပါက (၁)မိနစ်လျှင် - 35 ကျပ် SMS ပေးပို့ပါက တစ်စောင်လျှင် - 25 ကျပ် Network Data 1MB လျှင် - 25 ကျပ် Ooredoo ငွေဖြည့်ကဒ်များ ကို - 1000ks, 3000ks, 5000ks, 10000ks စသည်ဖြင့် ရရှိနိုင်ပါမည်။ Sim Card (1) ကဒ်ကို (၃)လ အထိ ငွေမဖြည့်ဘဲ သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။ (၄)လ ပြည့်ပြီး (၅)လထဲတွင် ငွေမဖြည့်ဘဲ နေပါက Sim Card ပိတ်သွားပါမည်။ (2.8.2014) မှ (15.8.2014) အတွင်း Ooredoo အချင်းအချင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုပါက မိနစ် - (900) minutes Free Ooredoo အချင်းချင်း SMS ပေးပို့ပါက အစောင်ရေ - (900) စောင် Free
အခြား Network သို့ ဖုန်းခေါ်ဆို ပါက မိနစ် - (90) minutes Free အခြား Network သို့SMS ပေးပို့ ပါက အစောင်ရေ - (90) စောင် Free (1)ရက်လျှင် Internet 20MB (Free) ရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။
Mobile Mother မှ Ooredoo Card များကို August (2) ရက်နေ့မှ စတင်ရောင်းချ ပေးသွားမည်။
Post By : MMIT
သယ်ဆောင် အသုံးပြုနိုင်သည့် ပလပ်ပေါက်ကို ပြတင်းပေါက် များတွင် ကပ်ခြင်းဖြင့် လျှပ်စစ် ပစ္စည်း များကို အားသွင်းနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ပလပ်ပေါက်သည် နေရောင်ခြည် စွမ်းအင်ကို ရယူပြီး လျှပ်စစ် စွမ်းအင်သို့ ပြောင်းလဲပေးမည် ဖြစ်သည်။ နေရောင်ခြည် စွမ်းအင်မှ လျှပ်စစ် စွမ်းအင်သို့ ကူးပြောင်း ပေးနိုင်သော ကိရိယာ များစွာ ထွက်ပေါ်ဖူး သော်လည်း ယခု ကိရိယာမှာ ပလပ်ပေါက် အနေဖြင့် တိုက်ရိုက် အသုံးပြုနိုင် ခြင်းမှာ ထူးခြားပါသည်။
ဒီဇိုင်နာ များဖြစ်သည့် Kyuho Song နှင့် Boa Oh တို့၏ အဆိုအရ လွယ်ကူရိုးရှင်းစွာ အသုံးပြုနိုင်မည့် Portable Socket ကို ဒီဇိုင်းပြုလုပ် ခဲ့ခြင်းဖြစ် ပါသည်။
Portable Socket သည် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကို ရယူပြီး လျှပ်စစ် စွမ်းအင် အနေဖြင့် ပြောင်းလဲ၍ သိုလှောင် သိမ်းဆည်း ထားမည် ဖြစ်သည်။ ထို့နောက်တွင် လျှပ်စစ် ပစ္စည်းများကို ပလက်ပေါက်နှင့် ချိတ်ဆက်၍ အားသွင်းနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
Socket တွင် ဘက်ထရီပါရှိပြီး စွမ်းအင်များကို သိမ်းဆည်းပေးနိုင်သည့်အတွက် အလင်းရောင် မရရှိသည့် ညအချိန်များ သို့မဟုတ် နေရောင်ခြည် မရရှိသည့် နေရာများတွင်လည်း ပလပ်ပေါက်မှ အားသွင်းနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
Portable Charger သို့မဟုတ် Portable Socket တွင် စုပ်ခွက်ပါရှိပြီး ပြတင်းပေါက်များတွင် ကပ်နိုင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ အတွင်းဘက်တွင် Solar Panel များကို တပ်ဆင်ထားပါသည်။ ဒီဇိုင်နာများက အဆိုပါ ကိရိယာသည် Charger/ Converter နှစ်မျိုးအနေဖြင့် အသုံးပြုနိုင်မည်ဟု ပြောပါသည်။
ယခုအချိန်တွင် Windows Socket သည် နမူနာပုံစံ အဆင့်သာ ရှိသေးသော်လည်း ဒီဇိုင်နာများက အနာဂတ်တွင် စွမ်းဆောင်ရည်၊ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုနှင့် အားသွင်းချိန်များကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် ပြုလုပ်ပေးရန် မျှော်လင့်နေပါသည်။ Windows Socket တွင် သေးငယ်သော 1000mAh Battery တပ်ဆင်ထားသော်လည်း မိုဘိုင်းဖုန်းတစ်လုံးကို အားသွင်းရန် လုံလောက်သည်ဟု သိရပါသည်။ သို့သော် အိမ်သုံးလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကို အားသွင်းရန် မလုံလောက်သေးဟု သိရပါသည်။ ကိရိယာကို နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်မှ အားသွင်းရန် ငါးနာရီမှ ရှစ်နာရီ ကြာမြင့်မည်ဖြစ်ပြီး လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကို ဆယ်နာရီကြာ ပြန်လည်အားသွင်းပေးနိုင်ပါသည်။
30 July 2014 13:52(+0630) (လွန်ခဲ့သော5နာရီ ခန့်က)
နေပြည်တော် မြို့မဈေးရှိ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းနှင့် အပိုပစ္စည်း ရောင်းဝယ်ရေး Mobile Zone ဆိုင်၌ ယနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် အော်ရီဒူး (Ooredoo) ဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာ လုပ်ငန်းမှ ဖုန်းဆင်းကတ်များကို ငွေကျပ် ၁၅ဝဝဖြင့် ရောင်းချခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ဖုန်းဆင်းကတ် ရောင်းချရာ၌ လိုင်စင်ဓာတ်ပုံ (၁)ပုံ၊ မှတ်ပုံတင် သို့မဟုတ် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် မိတ္တူ ပေးဆောင်ရသည့်အပြင် ငွေဖြည့်ကတ် ငွေကျပ် ၅ဝဝဝ တစ်ကတ်ပါ ရောင်းချပေးပြီး ဆင်းကတ်သည် သြဂုတ် ၁၄ ရက်အထိ စမ်းသပ် ကာလဖြစ်၍ ငွေဖြည့်သွင်း ရန်မလိုဘဲ သြဂုတ် ၁၅ရက်မှ ငွေဖြည့် နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ စမ်းသပ် ကာလအတွင်း Ooredooဆင်းကတ် အချင်းချင်း မိနစ် ၉ဝဝအခမဲ့ ဖုန်းခေါ် ဆိုနိုင်ပြီး အခြား မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း များသို့ မိနစ် ၉ဝအခမဲ့ ဖုန်းခေါ် နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် 1MB.3G.Internet အခမဲ့သုံး နိုင်ကြောင်းနှင့် ဆင်းကတ်များသည် 3G ရသော ဟန်းဆက်တွင်သာ အသုံးပြု နိုင်ကြောင်း Mobile Zone အရောင်းဆိုင်မှ ကိုညီညီဇော် က ရှင်းပြသည်။
ထို့အတူ နေပြည်တော်ရှိ အခြား Ooredoo ဆိုင်ခွဲများ တွင်လည်း ယနေ့စတင် ရောင်းချခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
30 July 2014 13:56(+0630) (လွန်ခဲ့သော5နာရီ ခန့်က)
မန္တလေး ဇူလိုင် ၂၉
မန္တလေးမြို့၌ အော်ရီဒူးဆင်းမ်ကတ်များကို ကျပ်၁၅ဝဝဖြင့် အော် ရီဒူး၏ ပါတနာဖုန်းဆိုင်များတွင် ယနေ့စတင်ရောင်းချပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
''ကတ် ၈ဝဝ လာပေးလို့ ဒီနေ့စရောင်းပေးလိုက်တယ်။ ၁ဝ ကတ်၊ ကတ်၂ဝ ဝယ်တဲ့သူများနေလို့ ဆိုင်ပိတ်ထားရတယ်''ဟုမန္တလေး မြို့ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်ရှိ သျှမ်း မင်းသားဖုန်းဆိုင်မှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးကဆိုသည်။
ယင်းဖုန်းကတ်တွင် အော်ရီဒူး ဆင်းမ်ကတ်အချင်းချင်းဆက်သွယ် ပြောဆိုနိုင်မည့် မိနစ် ၉ဝဝ၊ SMS အစောင်ရေ ၉ဝဝ၊ မြန်မာ့ဆက် သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမှ ဖုန်းများကို ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်မည့်မိနစ် ၉ဝ၊ SMS အစောင်၉ဝစာ ပါဝင် သည်။
ထို့အပြင် နေ့စဉ်အင်တာနက် အသုံးပြုရန်အတွက် ၂ဝ MBလည်း ပါဝင်ကြောင်းသိရသည်။ ယင်း အခမဲ့မိနစ်များမှာ သြဂုတ် ၁၄ရက် အထိ အသုံးပြုနိုင်ကြောင်းလည်း သိရသည်။
''သူ့ဖုန်းချင်းမဆက်ဘဲ MPT ကိုပဲ မိနစ် ၉ဝ ဆက်၊ မက်ဆေ့ခ်ျ အစောင်၉ဝပို့၊ နောက်မသုံးဘဲ နေရင်တောင်၆ဝဝဝကျော်သက်သာ နေပြီ''ဟု ဆင်းမ်ကတ်အသုံးပြုရန် MOBILE LIKE ဖုန်းဆိုင်သို့ လာရောက်ဝယ်ယူသည့် ကိုပြည့်စုံ က ဆိုသည်။
ယင်း ဆင်းမ်ကတ်များမှာ အနိမ့်ဆုံး Andriod Version 2.33, Processor1GHZ, Memory 256, Camera 3.2 Mpixel ရှိသည့် ဟန်းဆက်များတွင် အသုံးပြုနိုင် ကြောင်းသိရသည်။
ထို့အပြင် U900 မှ U2100 ကြားတွင်ရှိသည့် Keypad ဟန်း ဆက်များတွင်လည်း အသုံးပြု၍ ရနိုင်ကြောင်းသိရသည်။
''Mobile Mother က ဝယ် လာတာ။ ရှေ့ကလူတွေထိ ၁၅ဝဝ ပဲ။ကျွန်တော့်အလှည့်လဲကျရော ၁၇ဝဝဖြစ်သွားတယ်''ဟု ကိုဗလ က ပြောသည်။
ယင်းသို့ဝယ်ယူရာတွင် မှတ်ပုံ တင်မိတ္တူတစ်စုံဖြင့် ဝယ်ယူ၍ရနိုင် ပြီး နေ့စဉ်ရောင်းချပေးသွားမည် ဖြစ်သည်ဟုသိရသည်။
အော်ရီဒူးဆင်းမ်ကတ်ကို Activate ပြုလုပ်လိုပါက Access Point Name မှာ OOredoo Myanmar ဟု ရိုက်ထည့်ပေးရမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ပြည်သူလူထုရဲ့ အားပေးမှုတွေ အတွက် စိတ်လှုပ်ရှား ဝမ်းမြောက်မိပါတယ်။ လက်ရှိမှာ ဆင်းကဒ်များ ရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေတာကြောင့် နိုင်ငံတကာ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် အနေနဲ့ ကြိုတင်ပြီး အရောင်း နဲ့ ဖြန့်ချီရေး လမ်းကြောင်းတွေကို ဆင်းကဒ်များဖြည့်တင်းနေပါတယ်။ ဆင်းကဒ် တစ်ကဒ်ကို ၁၅၀၀ ကျပ်သာ ကျသင့်မှာဖြစ်ပြီး အဲဒီထက် ပိုပေးရတာတွေ မရှိအောင် သေသေချာချာ လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ မကြာခင်မှာ အားလုံးနဲ့ ချိတ်ဆက် နိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူး အထူးတင်ရှိပါတယ်။
We are excited about all of the activities in the market. As is standard practice, we are currently filling the retail channel with SIM cards as we prepare to sell SIM cards. We will be charging 1,500 Kyats foraSIM card so make sure you do not pay anymore. We look forward to connecting you soon.
Android Mobile Device များကို USB ကြိုးမလိုပဲ datatransferလုပ်ခြင်း
Air Droid အသုံးပြုနည်း
Android Mobile Device များကို
USB ကြိုးမလိုပဲ ကွန်ပြုတာဖြင့် ချိတ်ဆက်၍
ဒေတာများ အသွင်းအထုတ် လုပ်လို့ရမယ်
Camera က အစ ဖုန်းကနေ လှမ်းရိုက်လို့ရမယ်
ဖုန်းခေါ်လို့ရမယ် စာပို့လို့ ရမယ်
ကုန်ကုန်ပြောရရင် ဖုန်းတစ်လုံးကို ကွန်ပြုတာကနေ
ထိန်းချူပ်နိုင်တဲ့ Android APP လေး တစ်ခုပါ
အသုံးပြုနည်းကိုတော့ အောက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်
♪ Ooredoo ၏ ကာတာအခြေစိုက် Mobile Internet Pack ဈေးနှုန်းများ ♫
ထို့အတွက်ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း အဆိုပါဈေးနှုန်းအတိုင်းဖြစ်စေ ၊ အဆိုပါဈေးနှုန်းထက်လျော့ နည်းသော ဈေးနှုန်းများဖြင့် ဖြစ်စေ ရရှိနိုင်မည်ဟု ခန့်မှန်းရပါသည်။ ယခု အင်တာနက်တွင် ပြန့်နှံ့နေသော သတင်းများအရ အင်တာနက်ဈေးနှုန်းများမှာ အရမ်းကြီးမြင့်နေသည့်အတွက် အခြေခံတွက်ချက်မှုပြုလုပ် နိုင်စေရန်အတွက် ကာတာနိုင်ငံတွင် ၀န်ဆောင်မှုပေးနေသော ဈေးနှုန်းများကို မြန်မာငွေဖြင့် ခန့်မှန်းတွက် ချက်ပြပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
လာမည့် ၈ လပိုင်း ၂ ရက်နေ့တွင်လည်း Ooredoo Myanmar မှ ကျင်းပမည့် စာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲ ရှိကြောင်း သိရသည်။ သို့အတွက် အဆိုပါနေ့တွင် Ooredoo Myanmar မှ မိုဘိုင်းဖုန်းနှင့် ပတ်သက်သော သတင်းအချက်အလက် များ ၊ အင်တာနက်သုံးစွဲမှုနှင့် ပတ်သက်သော အချက်အလက်များကို တိကျစွာ အသေးစိတ် ထုတ်ပြန်လိမ့် မည်ဟု ယူဆရပါသည်။
Ooredoo ၏ ကာတာအခြေစိုက် Mobile Internet Pack ဈေးနှုန်းများ
1GB Plan (QR 60) -> 16000 kyats ( ၀န်းကျင်)
ဒေါက်တာအရှင်နန္ဒမာလာ ၏ အဘိဓမ္မာအကျဉ်းချုပ် တရားတော် အား Android
Application အနေဖြင့်ပြန်လည်ဖန်တီးရေးသားပူဇော်ပါသည်။ စာအနေနဲ့ရော
တရားအသံအနေနဲ့ပါ ဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါမည်။ မြတ်စွာဘုရားက မိဘကျေးဇူးဆပ်ရန်
ရည်ရွယ်၍ဟောကြားခဲ့သော တရားတော်ဖြစ်တာကြောင့် ဒီ application ကို
မိဘကျေးဇူးးကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေဆပ်ရာရောက်ပါတယ် လူငယ်တွေရဲ့ဖုန်းတွေမှာသွင်းပြီး တရားနာခြင်းအားဖြင့်လည်းကုသိုလ်တွေရရှိမှာကြောင့် အကျိုးများပါတယ်။ အဘိဓမ္မာအကျဥ်းချုပ် For Android ကိုအောက်က link ကနေရယူနိုင်ပါတယ်။
hlamyo: Total sms contol ဆိုတာ free down ခြင်တယ် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဖြေပေးပါဦး....
ဘယ်ကဖုန်းတွေလာနေတယ်။ မတ်ဆေ့ခ်ျတွေပို့နေတယ်။ ဆိုတာဖုန်းနံပါတ်တွေကို မတ်ဆေ့ခ်ျနှင့်ဖြစ်စေ၊Mail ပို့၍ဖြစ်စေကိုယ့်စေအကြောင်းကြားပေးမယ့် Application လေးတစ်ခုပါ။
ဒါတင်မက မတ်ဆေ့ခ်ျ ပို့တဲ့သူဘယ်သူဘယ်ဝါ ဆိုတာအပြင် Message Log တွေကိုပါဖတ်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Application လေးကို Install လုပ်ပြီး သူမသိအောင် Icon ကို password ပေးပြီးဖျောက်ထားလို့လည်းရပါတယ်။
ကဲ ….ချစ်သူရေ အူကြောင်ကြောင်တော့မလုပ်နဲ့နော်။ မင်းဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုယ်အကုန်သိနေတယ်လို့သာပြောလိုက်ပါတော့ရှင်။ ချစ်သူအချင်းချင်း ယုံကြည်မှုတွေ တိုးပွားနိုင်ကြပါစေနော်။
Windows Phone ကို Factory Reset ပြုလုပ်ခြင်း
Windows Phone 8.1 ကို အသုံးပြုသူတွေ အနေနဲ့ တစ်ခါတစ်ရံမှာကိုယ့်ရဲ့ Windows Phone Operating System အတွင်းမှာ ထည့်သွင်းထားတဲ့ App တွေများပြားလွန်းလို့ ပြန်လည် ရှင်းထုတ် ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ရဲ့ Setting ကိုစက်ရုံက ထုတ်လုပ်တဲ့အတိုင်း Default အနေနဲ့ ထားချင်တဲ့ အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ရဲ့ Windows Phone ကို Factory Reset ပြုလုပ်ပြီးစက်ရုံက ထုတ်လုပ်တဲ့ Settings အတိုင်း အသုံးပြုနိုင် မှာဖြစ်ပါတယ်။
Windows Phone 8.1 ကို Factory Reset ပြုလုပ်ဖို့အတွက် App list အောက်က Settings ထဲကိုသွား ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Settings ထဲကိုရောက်ပြီဆိုရင် About ဆိုတာကို Tap ပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ About အထဲကမှ Reset Your Phone ဆိုတာကိုနှိပ်ပြီး Yes ကိုရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ သတိ ထားရမှာကတော့ Factory Reset ပြုလုပ်ပြီဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ရဲ့အချက်အလက်တွေ ပျက်စီးမှာဖြစ်တဲ့ အတွက် Backup လုပ်သင့်တာများကို လုပ်ပြီးမှပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။
Internet Journal အတွဲ (၁၅)၊ အမှတ် (၂၃)
Monday, July 28, 2014 ဝင်းကမ္ဘာကျော် No comments
အင်တာနက် (Internet) နှင့် ပတ်သက်လျှင် W W W (World Wide Web) ကိုလည်း ညွှန်းဆိုလေ့ ရှိကြသည်။ သို့သော် Internet နှင့် WWW တို့သည် မတူကြပေ။ အင်တာနက် ဆိုသည်မှာ ကွန်ရက် (Network) များ ချိတ်ဆက် ထားမှုကို ခေါ်ဆိုပြီး၊ ကမ္ဘာ တစ်ဝန်း လုံးရှိ ကွန်ပျူတာများကို ကြိုးများဖြင့် ချိတ်ဆက်၍ လည်းကောင်း၊ ကြိုးမဲ့ စနစ်ဖြင့် ချိတ်ဆက်၍ လည်းကောင်း သုံးစွဲခြင်း နည်းပညာကို ခေါ်ဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။ World Wide Web ဆိုသည်မှာ အင်တာနက်နှင့် အင်တာနက် သုံးနိုင်ရန် စီစဉ်ဖန်တီးထားသော Web browser များကို အသုံးချပြီး၊ အကြောင်းအရာများ၊ စာမျက်နှာများ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ချိတ်ဆက်ကြည့်ရှုနိုင်ရန် ဖန်တီထားသော နည်းပညာတစ်ခု ဖြစ်သည်။
World Wide Web ကို ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင်၊ အင်္ဂလိပ် ရူပဗေဒပညာရှင် ဆာတင်မ်ဘာနာလီ ဆိုသူက တီထွင်ခဲ့သည်။ ကွန်ပျူတာဖြင့် တစ်ကမ္ဘာလုံး ချိတ်ဆက်ကာ ဆယ်သွယ်အသုံးပြုနိုင်ရန် သူက စတင် စိတ်ကူးတီထွင်ခဲ့ပြီး၊ နောက်ပိုင်းတွင် ကွန်ရက် ချိတ်ဆက်ခြင်းဆိုင်ရာ ပညာရပ်များကို ဆက်လက် တီထွင်ကာ ပရောဂျက်ပေါင်း များစွာ လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။
Website များတွင် (address ဟုခေါ်သည့် ဥပမာ- http://www.sciencekids.co.nz ဟု ခေါ်သော ရည်ညွှန်း လိပ်စာများကို အင်တာနက် ဝေါဟာရတွင် URL (Uniform Resource Locater) ဟု သတ်မှတ်ခေါ်ဝေါ် သုံးစွဲကြသည်။
အင်တာနက်တွင် Domain name ဆိုသည့် ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်အမည်များကို ပေးပြီး သုံးစွဲလေ့ ရှိကြသည်။ ဥပမာ (.com, .info, .net, .org, .edu, .mail, .gov) စသည်တို့ ဖြစ်သည်။ အခြားနိုင်ငံအလိုက် သတ်မှတ်ပေးထားသော domain ဆိုင်ရာ အမည်များလည်း ရှိသေးသည်။ ဥပမာ (.uk, .mm, .nz) စသည်တို့ ဖြစ်သည်။
အင်တာနက်တွင် စာပို့စနစ် (email)၊ ဖိုင်များကို မျှဝေသုံးစွဲခြင်း (file sharing)၊ အွန်လိုင်းတွင် အပြန် အလှန် စကားပြောခြင်း (online chatting)၊ ဖုန်းနှင့် ဗီဒီယိုစနစ်ပုံစံ ရုပ်မြင်သံကြား စကားပြောခြင်း (phone and video call)၊ အွန်လိုင်းဂိမ်းကစားခြင်း (online gaming) စသည့် လုပ်ဆောင်မှုများကို application ဟုခေါ်သည့် ဆော့ဖ်ဝဲများကို အသုံးပြုကာ လုပ်ဆောင်နိုင်ကြသည်။
ယခုအခါ အင်တာနက်နှင့် Web ကို အွန်လိုင်းတွင် ဈေးဝယ်ခြင်း (online shopping)၊ လူမှုကွန်ရက် ဆက်သွယ်ခြင်း (social networking)၊ ဂိမ်းကစားခြင်း၊ သတင်းများ ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ ခရီးသွားဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ဖော်ပြခြင်း၊ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများအတွက် အသုံးပြုခြင်း၊ ကြော်ငြာလုပ်ငန်းများ အတွက် အသုံးပြုခြင်း စသည့် လုပ်ငန်းများကို တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုနိုင်ပြီ ဖြစ်သောကြောင့် စတင် တီထွင်ခဲ့စဉ်က ရည်ရွယ်ချက်များထက် ပိုပြီး အကျိုးရှိစွာ သုံးစွဲနိုင်ကြပြီ ဖြစ်သည်။
ဆိုရှယ်ကွန်ရက် ဆက်သွယ်မှုတွင် Facebook, Google+, Twitter တို့သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် လူသုံး အများဆုံး ဖြစ်လာခဲ့ရသည်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် ဆိုရှယ်ကွန်ရက်ခေါ် လူမှုရေးကွန်ရက်များကို အသုံးပြုပြီး တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်မှုများ ခေတ်စားလာသည်နှင့်အမျှ ယင်းလူမှုကွန်ရက်နှင့် ဆက်စပ်ပြီး၊ ဝန်ဆောင်မှုများ၊ ဆော့ဖ်ဝဲများလည်း တိုးတက် ထွန်းကားလာခဲ့ရသည်။
အင်တာနက်ခေတ် ရောက်လာသည်နှင့်အမျှ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စများ၊ ပုဂ္ဂလိက ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ လွတ်လပ်ခွင့်များသည်လည်း အရေးပါလာခဲ့ရသည်။ မိမိတို့ လုပ်ဆောင် ဖန်တီးထားသည့် ဒေတာများကို ကာကွယ်ရန်အတွက် password များကို သုံးစွဲလာရခြင်း၊ ဆော့ဖ်ဝဲများသုံးကာ ကြိုတင်ကာကွယ် ရခြင်း များသည် အရေးကြီးလာသည်။ ဗိုင်းရပ်စ် (Virus) နှင့် စပန်း (Spam) တို့သည် ကွန်ပျူတာနှင့် မိမိတို့ လုပ်ငန်းများကို ခြိမ်းခြောက် ဒုက္ခပေးလာပြီး အင်တာနက် သုံးသူများတွင် ရှောင်လွှဲမရသည့် ဒုက္ခများ ဖြစ်လာသည်။
အင်တာနက် သုံးသူတိုင်းသည် Web ပေါ်တွင် သတင်းအချက်အလက်များနှင့် မိမိတို့ သိလိုသည့် အကြောင်းအရာများ ရှာဖွေရန်အတွက် Google သို့မဟုတ် Being စသည့် (Search Engine) ဟု ခေါ်သော ကြားခံ browser တစ်ခုခုကို အသုံးပြုရမည်သာ ဖြစ်သည်။ Google သည် ယခုအခါ နာမည်ကျော် လူသုံးအများဆုံး Search Engine တစ်ခုဖြစ်ပြီး နေ့စဉ် သန်းရာပေါင်း များစွာသော အချက်အလက်များကို ရှာဖွေရန်အတွက် ဝင်ရောက်ရသည့် အင်တာနက် တံခါးပေါက်ကြီး တစ်ခုသဖွယ် ဖြစ်နေခဲ့ရသည်။
ယခုအခါ တစ်ကမ္ဘာလုံး၏ လူဦးရေ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သည် အင်တာနက်ကို အသုံးပြုနေကြပြီ ဖြစ်သည်။ ၁၉၉၉ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း အင်တာနက် အသုံးပြုသူများ ဆယ်ဆခန့် တိုးမြင့်လာခဲ့သည်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် အင်တာနက် အသုံးပြုသူ တစ်ဘီလီယံ စတင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်တွင် နှစ်ဘီလီယံ ရှိသွားသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်ကုန်ခန့်တွင် သုံးဘီလီယံအထိ တိုးမြင့်သွားလိမ့်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။
Source : Internet Live State
Ref : The Voice Daily
android ဖုန်းအတွက် icom တွေကို အလှပဆုံးပုံဖော်ပေးနိုင်တဲ့ Kinux icons Pack Version : 2.1.1 Apk လေးပါ ။ ဒီကောင်လေးကတော့သူငယ်ချင်းတို့ပုံမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲ android ဖုန်းအတွက် icom
တွေကိုအလှပဆုံးအသေသပ်ဆုံး အလန်းဆုံး design လေးတွေနဲ့ပုံဖော်နိုင်ပါတယ် ။ အသင့်ပါလာတဲ့
သူ့ရဲ့ icom stile လေးတွေကလဲစုံလင်လှတာမို့သဘောကျနိုင်စရာပါ ။ Android Version : 4.0 နှင့်
** Step-1.အောက်က Download Button
Posted by lin linn at 2:46 AM
ငွေကြေးတန်ဖိုးနှုန်းတွေကို ဘယ်လောက်ရှိသလဲ ဆိုတာ internet ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ ပြသပေးမယ် currency converter for Android
မိတ်ဆွေများခင်ဗျာ နိုင်ငံခြားငွေဟာ မြန်မာငွေ
တန်ဖိုး ဘယ်လောက်လည်း သိချင်ပါသလား
ကြည့်နိုင်ပါတယ် နိုင်ငံအလိုက် ဖော်ပြပေးထားပါ
တယ် internet ခဏဖွင့်လိုက်တာနဲ့ လည်ပတ်နေ
သော မြှားလေးကို နှိပ်လိုက်ပါ ယနေ့ရပ်တည်နေ
သော ငွေကြေးကို ပြသပေးမှာပါ ဒေါ်လာဆိုတာ
ဖြစ်တတ်ပါတယ် ဒါလည်း internet ဖွင့်
လည်ပတ်နေသော မြှားနှိပ်လိုက်ပါ ပြသပေးပါလိမ့်
မယ် ဒါကို kaungkalay ရဲ့ သူငယ်ချင်း
ပိုင်ပြည့်စုံ ရေသားထားတာပါ ။
Posted by lin linn at 2:33 AM
Posted by lin linn at 2:31 AM
♪ ဖုန်းထဲက App: တွေရဲ့ Icon ကိုလိုသလိုပြောင်းပေးနိုင်တဲ့ - Icon Changer free v3.1.2 Apk ♫
Icon Changer ဆိုတာက ကျနော်မပြောခင်ထဲက User တွေသဘောပေါက် နေလောက်ပါပြီ။ Android Device တွေမှာ ရှိတဲ့ Icon တွေကို ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ပုံပြောင်းလဲလို့ရတဲ့ Application လေးတစ်ခုဖြစ် ပါတယ်ဗျာ။ ဆိုလိုတာက Facebook App သွင်းထားတယ်ပေါ့ မိမိဖုန်းမှာ မူရင်း ပေးထားတဲ့ App icon အပြာလေးမကြိုက်ရင် … ကိုကြိုက်တဲ့ ပုံလေးနဲ့ Shortcut အစားထိုးပြောင်းလေးပဲတာပဲဖြစ်ပါတယ် .…
အရောင်အပြင်မိမိဓာတ်ပုံတွေနဲ့ လည်း Icon ပုံလေးတွေကို ပြောင်းလို့ရပါတယ်။ နောက်ထပ်Iconပုံစံ အသစ်အစမ်းတွေလိုချင်သေးတယ်ဆိုရင် လည်း ဒီapkကနေတစ်ဆင့် ဒေါင်းလုပ်ထပ်ဆွဲနိုင်ပါသေးတယ်...
သူကမူရင်း Apk ၇ဲ့ Iconတွေကိုပြန်ချိန်းလို့ မရအောင်ပြောင်းလဲတာမျိုးမဟုတ်ပဲ home Screenပေါ်မှာ Shortcut ဖန်တီးပေးတာဖြစ်လို့ မူရင်း Iconပျက်သွားမှာလဲ စိုးရိမ်စရာမလိုပါဘူးဗျာ။
.မိမိစိတ်ကြိုက် Iconတွေကိုဖန်တီး ပြောင်းလဲချင်သူများ Download ရယူနိုင်ပါပြီ။ Android 2.2 နှင့် အထက်အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် … Root မလိုအပ်ပါဘူးဗျာ …
-မိမိတို့ android ဖုန်းပေါ်မှာ ရှိတဲ့ video file တွေ photo တွေ၊Sms massage တွေ၊contact
Facebook message ​တွေ၊
အားလုံးကို ဒီ vault ဆိုတဲ့ application လေးကို အသုံးပြုပြီး ဖွက်ထားလို့ သိမ်းဆည်းထားလို့ရပါတယ်။
App ​တွေကို Lock ချလို့ရတဲ့ Feature ပါ ပါဝင်​ထားတာမို့လည်း User များ ကြိုက်​နှစ်​သက်​​စေမှာပါ။
အထူးသဖြင့်တော့ video file တွေဟာ သိပ်များနေရင်ကိုယ့်ဖုန်းရဲ့  internal memory store ပေါ်မှာလေးလံနေစေပြီး နောက်ထပ် file တွေ ထပ်ထည့်လို့မရေ့လောက်အောင်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
အဲဒိတော့ဒီ apk လေးထဲကို ပို့ပြီးသိမ်းထားလိုက်ခြင်းအားဖြင့် တခြားသူလည်း ဖွင့်ကြည့်လို့မရ လုံခြုံစိတ်ချရပြီး ကိုယ့်ဖုန်းလေးဟာလည်း ပေါ့ပါးနေစေမှာပါ။
အဲ ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ အားသာချက်တစ်ခုကတော့
screen ပေါ်မောင်းတင်ထားတဲ့ သူ့ဆော့ဖ်ဝဲလ် လေးကို delete ဖျက်ပလိုက်မိရင်လည်းကိစ္စမရှိပါဘူး။
sd ကတ်ထဲက ပြန်ပြီး install ပြန်မောင်းတင်လိုက်ယုံနဲ့ ကိုယ်သိမ်းဆည်းထားတဲ့ data အချက်အလက်တွေကို ပြန်လည်ရ ရှိ တွေ့မြင်ရမှာပါ။
sd ကတ်ထဲက ဆော့ဖ်ဝဲကိုတော့ မဖျက်ပစ်နဲ့ပေါ့ဗျာ။
ပြီးတော့ နောက်တစ်ခုက ကိုယ့်မှတ်ထား ဖွက်ထားတဲ့ အချက်အလက် data တွေကိုလည်း online store မှာ သွားရောက် upload တင်ပြီး သိမ်းဆည်းနိုင်ပါသေးသဗျာ။
ကျနော်ကတော့ဒီ apk လေးကိုစွဲစွဲမြဲမြဲ အသုံးပြု လျှက်ပါပဲဗျာ။
ကဲ ကဲ စကားပြောနေရတာလည်း တော်တော်လေးကြာသွားပြီဗျာ။
-Android OS Version 2.0.1 နဲ့အထက်​ရှိ
ဖုန်းများမှာထည့်​သွင်း install ပြုလုပ်​၍အသုံးပြုနိုင်​
android သမားတွေအတွက် 2014-07-23 နေ့ကမှအသစ်ထွက်လာတဲ့ PhotoSuite3Photo Editor APK ရဲ့ Update လေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော် ။ဒီကောင်လေးကတော့ မိမိတို့ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကို
အလှပဆုံးဖြစ်အောင်ဖန်တီးပေးနိုင်ပြီးဓာတ်ပုံတွေကိုမိမိတို့ကြိုက်သလို design ဖော်တာတို့ကိုအကောင်း
ကောင်းကောင်းသိကြမှာပါ ။ ခုထွက်လာတဲ့ Update လေးကလဲအရင်ကထက် tools နည်းနည်းပိုပြီးတော့
စုံလင်လာတာရယ် design လေးတွေကလဲပိုပေးထားတာရယ်ကြောင့်လူကြိုက်များဦးမှာပါ ။ သူ့မှာအဆင်သင့်ပါလာတဲ့ sticker လေးတွေကလဲအရင်ကထက်လန်းနေအောင်ပြုလုပ်ပေးထားပြီး
စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပြီးတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုလဲ မိမိတို့ရဲ့ facebook page ကိုခါတည်းတင်လို့ရအောင်စီစဉ်ပေး
ထားပါသေးတယ် ။ size ကတော့ 4.9 Mb ရှိပြီး Android 2.3.3 နှင့်အထက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် ။
အော်ရီဒူး SIM card activation လုပ်ရန်ပါတဲ့ခင်ဗျ....။
CLICK HERE TO DOWNLOAD FROM P-CLOUD
♪ Original ပါသော App: များကိုဖယ်ထုတ်ပေးမယ့် - System App Safe Remover v3.2.1011 Apk ♫
Version 3.2.1011နဲ့ ထွက်လာပြီး လုပ်ဆောင်ချက်တွေကလဲ ထပ်တိုးလာပါတယ်။ Samsung တွေမှာ application တွေကိ်ု SD cardထဲပြောင်းလို့မရတာကို ဒီကောင်လေးက ဖြေရှင်းနိုင်ပါပြီ။
Move to SD card/Move to Phone ဆိုတဲ့ Systemပါပါ ရှိလာပါတယ်။
Original Application တွေကို Error ကင်းကင်းနဲ့ အလွယ်တကူဖျက်နိုင်တဲ့ Application လေးပါ ။ ဒီ App: လေး ကိုအသုံးပြုနိုင်ရန် သင့်ဖုန်းမှာ Root Access ရရှိပြီးသား ဖြစ်ရပါမယ်။ ဒါကြောင့် သင့်ဖုန်းပာာ Root ဖောက်ပြီး သားဖြစ်ရပါမယ်။တစ်ချို့က ကိုယ့်ဖုန်းမှာပါတဲ့ Original Application တွေကိုဖျက်ချင်ကြပါတယ်။
ဥပမာ – Huawei လို China ဖုန်းတွေပေါ့ဗျာ။ သူတို့မှာ ကိုယ့်နိုင်ငံနဲ့အသုံးပြုလို့မရတဲ့ Application တွေ ပါလာတက်ပါတယ်။ China Store တို့ဘာတို့ပေါ့ဗျာ။ အဲလို Application တွေကို တစ်ချို့ကမမြင်ချင်ကြဘူး။ တစ်ချို့ကလဲ ဖုန်းရဲ့ Memory ထဲမှာ နေရာတွေအသားလွတ်ယူနေတာကြောင့် ဖျက်ချင်ကြတယ်။ အဲဒီအခါတစ်ချို့က Setting ထဲက Manage Application ထဲကိုဝင်ပြီး ဖျက်တက်ကြသလို Root Explorer Application တွေနဲ့ ဖျက်တက်ကြပါတယ်။ အဲလိုဖျက်တဲ့အခါ Error တွေတက်ကြတယ်။ Error တက်လို့ ကိုယ်ဖျက်လိုက်တဲ့ Application တွေကိုပြန်ထည့်ချင်တဲ့အခါအခက်အခဲတွေ့ကြရပါတယ်။ တစ်ချို့ဆို Reset ပြန်ချကြ ၊ Resetချလို့မရရင်Firmware ပြန်တင်ကြနဲ့အလုပ်တော်တော် ရှုပ်ကြရပါတယ်။ အဲဒီလို Error တွေမတက်အောင် ဒီ Application လေးနဲ့ ဖျက်နိုင်တဲ့အပြင် ဖျက်ပြီးသား Application တွေကို ပြန်လိုချင်ရင်လဲ Restore ပြန်လုပ်လို့ရအောင် ဒီ Application ထဲမှာRecycleBinအနေနဲ့ပါလာတာကိုလဲတွေ့ရပါတယ်။ဒီတော့ အဆင်ပြေတာပေါ့ဗျာ။
Credit to ==> Today's Technology မိုဘိုင်းဖုန်းပြုပြင်နည်းသင်တန်း
Facebook ကပေးတဲ့ Facebook ID Card ထုတ်ယူနိုင်ပါပြီ
Facebook ကပေးတဲ့ ကိုယ့်၇ဲ့ ID Card ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ့်၇ဲ့ ID ကဒ်ကိုထုတ်ယူချင်တယ်ဆိုရင်တော့http://xeefunapps.com/facebook_id_card.php
Facebook ID Card ကိုနှိပ်ပါ။
ပြီးရင် Click Here to Share On Facebook ကိုနှိပ်ပြီး
ကိုယ်၇ဲ့ ID ကဒ်ကိုထုတ်ယူနိုင်ပါပြီ ခင်ဗျာ
♪ Sim Cardများကို အများပြည်သူ အကန့်အသတ်မရှိဝယ်ယူနိုင်ရန် နိုင်ငံတကာအော်ပရေတာများထက်ဦး၍်MPT ကရောင်းချမည်(၂၅.၇.၂၀၁၄) ♫
Ooredoo Sim Card များကိုသြဂုတ်ကာလအတွင်း၌လည်းကာင်း၊ TelenorSimများကို စက်တင်ဘာလတွင် လည်းကာင်း ရောင်းချပေးနိုင်ရန်စီစဉ်သွားမည့်ဟုသက်ဆိုင်ရာMobileOperatorများက၀န်ကြီးဌာနသို့ပြော ကြားထားကြောင်း ဆက်သွယ်ရေး၊ သတင်းအချက်အလက်နှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးသန်း ထွန်းအောင်ကပြောကြားခဲ့သည်။ထို့အပြင် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းအနေဖြင် KDDI, Sumitomo Corporationတို့နှင့်ပူးပေါင်း၍ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍအတွင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း(၂,၀၀၀)ရင်းနှီးမြုပ်နှံသွား မည် ဖြစ်သည်။ပူးပေါင်းပြီးနောက်ပိုင်းကာလတွင်MPTအနေဖြင့်Ooredoo,Telenorအစရှိသည့်မိုဘိုင်းလ်အော် ပရေတာများထက်ပိုမိုကောင်းသည့်ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းမှဦးခင်မောင်ထွန်းက ပြောကြားခဲ့သည်။ "Telenor,OoredooSimCard တွေက အင်တာနက်ပါဝင် မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းပြိုင်ဖက်အော်ပရေတာတွေထက်မလျော့စေရပါဘူး။သူတို့ထက်ဦးအောင် လုပ်သွားဖို့ပဲရှိပါတယ်။ US $ (2)ဘီလီယံကိုတော့ (၂) နှစ်(၃) နှစ်အတွက်ပုံးအောပြီး Telecom Sector မှာရင်နှီးမြုပ်နှံသွားနိုင်ပါတယ်။ နေရာဒေသမရွေး၊ကိုယ်ဝယ်ချင်တဲ့ Sim Card ကိုဝယ်သူစိတ်တိုင်းကျ အတိအကျဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။အကန့်အသတ်မရှိဝယ်နိုင်မှာပါ။GSM နဲ့ WCDMA ကိုရောင်းချပေး သွားမှာပါ။ အဓိကကတော့ WCDMA (3G)ကိုအသားပေးရောင်းချ သွားဖို့ရှိပါတယ်””ဟု MPTမှ ကိုသက်နောင်ထွန်းက၂၀၁၄ခုနှစ်ဇူလိုင်(၁၆) ရက်နေ့တွင်ပြောကြားခဲ့သည်။
KDDI, MPT နှင့်Sumitomo Corporation တို့အကျိုးတူပူးပေါင်း၍ (၁၀) နှစ်စာချုပ်ကို ချုပ်ဆိုထားပြီးဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်Telecomကဏ္ဍအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကိုစီစဉ်ပေးအပ်သွားမည် KSGM (KDDI Summit GlobalMyanmarCo.,Ltd)ကိုဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ်သည်။လက်ရှိကာလ အထိမြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းတွင် ၀န်ထမ်းဦးရေ (၈,၅၀၀) ရှိကြောင်းသိရှိရသည်။
♪ Android OS 2.3 to 4.4 အထိ Root ဖောက်ရန်အကောင်းဆုံး Root Apk 9မျိုး ♫
အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ Android Root Tools တွေကိုတော့ တွေ့တုန်းလေးယူထားစေချင်ပါတယ်ဗျာ။ ဖုန်းဆိုင်ကကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတွေကိုစမ်းသပ်ခိုင်းပြီး တော်တော်များများအောင်မြင်တဲ့ Root Tools Apk များကိုစုစည်းပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ကွန်ပြူတာနဲ့ချိတ်ဆက်စရာမလိုဘဲ Root Apk ကိုဖုန်းထဲထည့်ပြီး Run လိုက်တာနဲ့ Root ဖောက်ပြီးသားဖြစ်စေမှာပါ။ အခြားသော Service မှ မိတ်ဆွေများလည်းဒေါင်းယူ ထားစေချင်ပါတယ်ဗျာ။ Android OS 2.3 to 4.4 အထိ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Root Apk 9မျိုးကိုအောက် မှာဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
Android Version 4.3 ROOT v1.2.0 By www.pyaephyo.com.apk
Baidu Root2001 By www.pyaephyo.com.apk
King Root v2.30 By www.pyaephyo.com.apk
Pro Myanmar Root v1.3.6 By www.pyaephyo.com.apk
Root Master v1.3.6 By www.pyaephyo.com.apk
Towel Root v1.0 By www.pyaephyo.com.apk
Universal Sals Root v1.5 By www.pyaephyo.com.apk
Vroot v1.0.5.1 By www.pyaephyo.com.apk
z4root.1.3.0 By www.pyaephyo.com.apk
G730-U00 & Honor 3C တို့အတွက် မြန်မာစာမှန်ကန်အောင်သွင်းပေးနိုင်မည့် MM Font Installer
Window အတွက် Tool မရေးတာကြာတာက တစ်ကြောင်း
ပြီးတော့ Honor တွေ G730 တွေမှာ 123 ရိုက်မရတာတွေရှိနေသေးတော့
ဒီ Tool ကိုရေးလိုက်တာပါ။ Apk ပုံစံအနေနဲ့ကတော့ Ye Lin Aung Kseရဲ့ Apk ရှိပါတယ်။
အရင် ARM Tool Kit တွေရေးတုန်းက C# နဲ့ ရေးပေမဲ့ ကျွှန်တော့်သင်တန်းသားတွေကိုယ်တိုင်
.net သွင်းမရတဲ့စက်တွေနဲ့ Error တွေများလို့ Java နဲ့ ဒီတစ်ခါရေးလိုက်ပါတယ်။
Instruction တွေစုံလင်စွာ ပါဝင်တဲ့ Tool ကို ဒီမှာဒေါင်းပါ။
အိုင်ဖုန်းကို iTune ကမသိတဲ့ error ကို အလွယ်ကူဆုံး ဖြေရှင်းနည်း
အိုင်ဖုန်းကို itune ကမသိတဲ့ error ကို အလွယ်ကူဆုံး ဖြေရှင်း နည်းလေးပါ
Itunes cannot read contents of the iphone–
အဲ့လို စာသား ပေါ်လာရင် iphone ကို itune က မသိ့တော့ပါဘူး ခင်ဗျာ restore လုပ်ခိုင်းပါတယ်
အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့ အကြောင်း အရင်းက ဖုန်းထဲမှာ သီချင်းထည့်ထားတဲ့ ပမာဏ များတာကြောင်းလို့ ယူဆနိုင်ပါတယ် (ဒါက ကျွန်တေ်ာ့ အတွေးပါ)
အပေါ်က စာသား error ပေါ်လာပီဆိုရင် ဖုန်းကို restore မလုပ်ပါနဲ့ လိုအပ်တဲ့ software ကို အောက်ကနေဒေါင်းပါ
i funbox ဒေါင်းလို့ပီးရင် သူ့ကိုဖွင့်ပါ (မိမိဖုန်းထဲမှာ ifile ရှိရင်လည်း ရပါတယ်) phoneနဲ့ ချိတ်ဆက်ပါ
ပီးရင်i funbox class ကိုနှိပ်ရပါမယ်
-ပေါ်လာတဲ့ အထဲက Raw file system ကိုနှိပ်ပါ(+) ကိုနှိပ်ရမှာပါ
၀င်းပီးသွားရင် အဲ့အထဲမှာ ရှိတဲ့ ItuneCDB နဲ့ ItuneDB ကို ဖျက်ပစ်ပါ (တစ်ခါတစ်လေမှာ တစ်ခုတည်း ပါနေတတ်ပါတယ် ရှိတဲ့တစ်ခုဘဲ ဖျက်ပစ်ပါ)
ပီးရင်iTunes_Control ထဲက music ဆိုတဲ့ ဖိုဒါကို ဖျက်ပစ်ပါ သီချင်း ပျက်မသွားပါဘူး ခင်ဗျာ
အကုန်လုပ်ပီးသွားရင် ဖုန်းကို ပါဝါပိတ်ပြန်ဖွင့်လိုက်ပါ itune က သိ့နေတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်
နေပြည်တော်တွင် Ooredoo ဆင်း ကတ် များ ရောင်းချ၊ မိန...
Android Mobile Device များကို USB ကြိုးမလိုပဲ data...
★★ Kinux icons Pack Version : 2.1.1 Apk ★★ android...
ငွေကြေးတန်ဖိုးနှုန်းတွေကို ဘယ်လောက်ရှိသလဲ ဆိုတာ int...
♪ Android OS 2.3 to 4.4 အထိ Root ဖောက်ရန်အကောင်းဆံ...
G730-U00 & Honor 3C တို့အတွက် မြန်မာစာမှန်ကန်အောင်...
အိုင်ဖုန်းကို iTune ကမသိတဲ့ error ကို အလွယ်ကူဆုံး ...
★★ Memory & App Cache Cleaner Version : 2.6.8 Apk ...
★★ Camera for Android (Nexus)Version : 4.2.4.2 Apk...
♪ အော်ရီဒူးဆင်းကတ်များ မန္တလေးအရောင်းကိုယ်စားလှယ်မျ...
Ooredoo Myanmar SIM Card တွင်အသုံးပြုရန် ဖုန်းနံပါ...
မိုဘိုင်းဖုန်းHardware Errorများနဲ့Solution အကျဉ်း...
♪ Android နှင့်ပက်သက်၍ အနည်းဆုံး သိသင့်သမျှ ဗဟုသုတ...
✏Google Play Store v4.9.13 has arrived, download a...
✏baidu-root v2.4.5 apk✏
GreenLight Dictionary for android
ဖုန်း / သင်ပုန်း သုံးသူတွေရဲ့ အကောင့်
✏Ultimate Guitar Tabs & Chords v3.6.2 [Unlocked]Ap...
♪ SAMSUNG KOREA MODEL များတွင် Internet Error ဖြေရ...
✏MM App Font Helper v1.0(android)✏
♪ အနာဂတ် စမတ်ဖုန်း မျက်နှာပြင်များသည် အသုံးပြုသူ၏ ...
♪ Samsung Galaxy Note4တွင် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် တိ...
♪ Free Wifi များကို Auto ရှာဖွေပြီးချိတ်ဆက်ပေးမယ့်...
♪ Music & Video များကိုကြည့်ဖို့အမိုက်စား ရွှေအိုရေ...
သွေးပေါင်ချိန် (BP)ကိုတိုင်းတာတဲ့ Apk
♪ ကားပြိုင်မောင်းတာ ၀ါသနာပါသူများတွက် Hack ထားပြီး...
★★ WiFi Overview 360 Pro v2.50.14 Apk (All Android...
✏Call Confirm PRO v2.05(for android)✏
ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမား မှတ်ပုံတင်ရေး မြန်မာသံရုံး က...
Mobile Hardwareသမားများနှင့်လေ့လာခါစသူများအတွက် MO...
♪ Facebook ပေါ်မှာ Single , Married , Relationship ...
✏Flash Ring v2.1.3 Apk(for android)✏
✏Google Play Store v4.8.22 has arrived, download a...
မိုဘိုင်းဖုန်ုး သုံးသူများ သတိထားရန် ကျန်းမာရေးဆို...
ကျွန်တော့်ဘလော့ခ်ဖုန်းကနေ Offline အနေဖြင့်ကြည်...
Samsung က iPhone6ကို ယှဉ်ပြိုင်ရန် Galaxy Alpha ...
သြဂုတ် ၁၃ ကစပြီး နယ်စပ်ဖြတ်ဗီဇာသက်တမ်းတိုးသူများကု...
Samsung Galaxy Note4တွင် eye scanner ပါဝင်လာဖွယ်...
Android ဖုန်းနဲ့ Karaoke ဆိုနိုင်မယ့် Mini Karaoke...
♪ DW Contacts & Phone & Dialer v2.6.7.0-pro Apk Up...
Video Bee Apk
BuddhaDhamma Apk For Android
✏iDevice များအတွက်​Apple ID ဖွင့်​နည်း စာအုပ်​✏
Photo Grid for Android ပုံလေးတွေ ပြုပြင်ရအောင်
Windows မှ ဖိုင်များကို Android , iPad နဲ့ iPhone ...
Android ဖုန်းများသည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များ...
★★ Real Football World Cup 2014 1.1 Apk (All Andro...
ElectroDroid Pro v3.6 Apk Full
Root Master 2.2.0.apk
စက်ရုပ် ဖုန်းတွေ အားလုံးမှာ မြန်မာဖောင့်အတွက် ကိရိ...
Huawei ဖုန်းများ အတွက် Root မလိုပဲ မြန်မာစာသွင်းနိ...
မြန်မာ iPhone user များအတွက် myominhan's cydia sou...